Ireo loko isan-karazany amin'ny fampiasana azy sy mitambatra | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Cheats
Betsaka na latsaka daholo fantatsika ny fihetsem-po na ny fahatsapana omen'ny loko. Ny iray amin'ireo ohatra mazava indrindra dia ny mena amin'ny planeta Mars izay manondro ny ady na ny an'ny serizy, izay adika ho fitiavana. Ny fahalalana ny dikan'ny loko tsirairay dia ilaina hanamafisana endrika iray amin'ny hafatry ny meme, na koa hifantohan'ny paleta loko amin'ny famolavolana tranonkala.
Fa inona no mitranga rehefa te hampifangaro azy ireo isika? Azontsika atao ny milaza fa ny olana dia toa manandrana mahita fa ny maintso afaka mifanaraka tsara kokoa amin'ny voasarimakirana mavo izay manalefaka ny hamafin'ny iray na ny iray hafa. Iray amin'ireo lakilen'ny famolavolana ny fahalalana ny fomba hisafidianana ny loko marina ka hiseho ny firindrana hita eo amin'ny mpijery na ny mpampiasa izay manokatra ny rindranay voalohany.
Miaraka amin'ity dia mandeha mivantana amin'ny inona isika mila maso efa zatra tsara ny mamantatra azy haingana izay loko mifanaraka amin'ny iray hafa mba hanomezana dikany manokana. Na te-hanaitra ny mpijery amin'ny panorama mahatalanjona isika, filentehan'ny masoandro amam-pitiavana na seho mavitrika izay ahafahan'ny loko samy hafa manome antsika ny fahatsapana fa mihetsika ny sary na dia tsy mihetsika aza.
1.1 Ny loko volomboasary
1.2 Ny loko volomparasy
1.3 Loko mavo
1.4 Ilay Mena
1.5 Ny loko manga
1.6 Loko mainty
1.7 Ny loko maitso
2 Mitambatra loko mitambatra
2.1 Klasika sy Retro
2.2 Mamirapiratra manga sy maitso
2.3 Ireo volomparasy sy voasary amin'ny filentehan'ny masoandro
2.4 Ny fitoniana manga ny Mediteraneana
2.5 Ilay be pitsiny sy milamina
2.6 Ny tendrombohitra manga
2.7 Vintage tamin'ny taona 50
2.8 Turquoise sy mena
2.9 Ny 70
2.10 Ny hakanton'ny voajanahary amin'ireo tany
2.11 Ny ranomasina sy ny lanitry ny helo-drano
Alohan'ny hifindrana amin'ny fitambarana loko sarotra kokoa, andao mandehana miloko isan-karazany miresaka momba ny mampiavaka azy manokana sy ireo loko iarahany. Hanoro hevitra foana izahay fa ny fanandramana dia fomba iray hafa hahitana ireo fitambarana ireo, na dia efa nolazainay aza dia tsy maintsy miasa ny masontsika na manana izany talenta voajanahary izany hamantarana ireo fitambarana miseho ho azy.
Ny loko volomboasary
Izahay dia eo alohan'io loko io izay afaka mandrangitra herisetra lehibe rehefa hitantsika fa io no tena axis amin'ny famolavolana an'i Stanley Kubrik's A Clockwork Orange. Na eo aza izany dia midika ny hevitry ny fanovana, ny maoderina ary izay miavaka. Miatrika ny iray amin'ireo loko tian'izy ireo na tsy tiany izahay, fa tena izy ireo.
Mila tsara miaraka amin'ny paleta volomboasary ary miaraka amin'ny loko toy ny maintso. Miaraka amin'ireo tany izay ahitantsika azy koa, ankoatry ny mena sasany. Raha tsy te ho sarotra loatra isika, ny fametrahana azy eo akaikin'ny volon'ny volomboasary no toerana tsara indrindra.
Ny loko volomparasy
Efa fantatsika fa amin'ity taona ho avy ity, 2018, UV no loko nofidian'ny PANTONE. Loko iray izay dia miafina noho ny tsy fantatra ary ny fikarohana ny zavatra rehetra ho hita. Mampihetsi-po sy be fieritreretana, miatrika loko hafa ananan'ireo mpanakanto toa an'i Prince izahay.
Raha mitady fitambarana isika dia afaka mahita azy tsara amin'ny tany, karazan-boasary ary andiana tononkalo volomparasy izay mahery vaika kokoa noho ny voalohany. Ny maitso dia mety ho fifanoherana tsara, indrindra rehefa manga kokoa noho ny mavo.
Iray amin'ireo loko manaitra indrindra amin'ny fahitana azy, na dia eo aza izany hiankina izany raha mena kokoa noho ny manga. Ny fikolokoloana volomboasary dia mampitsahatra ny maso hatrany, fa miaraka amin'ny manga, ny sery dia manomboka manome karazana fahatsapana hafa mifandraika amin'ny hatezerana. Loko sarotra izy io.
Amin'ny lanitra manga dia azontsika atao ny mametaka azy tsara ary rehefa manakaiky ny iray amin'ireo feo manga na mena izy dia afaka mifanaraka amin'ny olona rehetra. Azontsika atao koa ny manemitra azy amin'ny loko maizina mba hahafahany miavaka be amin'ny sehatra rehetra.
El loko filan'ny fitiavana, fitiavana ary ilay afaka mampahatsiaro antsika zavatra maro kokoa. Izy io dia iray amin'ireo loko voalohany, noho izany ny fiankinan-doha dia miankina betsaka amin'ny fomba hiatrehantsika ny iray na ny hafa. Azontsika atao ny manasongadina ny dikany amin'ny volondavenona, raha toa ka mitady maitso isika dia afaka mampihena ilay firehetam-po sy angovo izay afaka omeny amin'ny singa web ampiasantsika azy.
Miaraka amin'ny maintso dia mitambatra tsara izy, saingy miankina amin'ny tonony izany. ny oliva dia ho mpiara-milalao tsara foana. Afaka mitondra anao hamaky mena maromaro misy fotsy hamaranana mavokely izahay.
Ny loko manga
Ny mpanjaka miloko mangatsiaka sy izany dia hita hatraiza hatraiza manome, am-boalohany, fitoniana, filaminana ary hatsiaka. Mila mijery ambany lalana fotsiny ianao vao mahita an'io loko io amin'ny fiara be dia be.
Afaka manambatra anao izahay miaraka amina karazana manga manga, toy ny maintso ary mena. Raha tsy te hanana risika manokana isika, dia afaka mahazo antoka fa tsy ho diso isika raha tsy manakorontana azy io betsaka.
Haizina, ny fahafatesana sy ny pessimism dia mipoitra miaraka amin'ny loko mainty, na dia azo omena dikany hafa koa amin'ny haitraitra sy kanto. Tokony ho hitanao fotsiny fa ny lokon'ny rambony sy ny akanjo hariva ho an'ny fitafiana.
Izy io dia loko izay mifangaro tanteraka amin'ny rehetra, na dia afaka manome izany fahatsapana haitraitra sy kanto izany aza.
ny angovo azo havaozina, ny natiora ary ny planeta miakanjo tokoa izy ireo mba hampisehoana ny velona sy ny salama. Izy io koa dia omena poizina ary raha mijery vokatra fanadiovana ianao dia mampiasa maitso ny ankamaroan'izy ireo hanolorana ireo fahatsapana ireo.
Podemos mitambatra amin'ny loko eto an-tany toy ny karazany maitso izay mitondra antsika amin'izany toetra izany ary manondro azy io amin'ny toetry ny fahasalamana. Miaraka amin'ny volontsôkôlà dia mifanaraka tsara koa izy io.
Mitambatra loko mitambatra
Vitsy fitambarana izay manompo antsika hanome saina sy vinavina samihafa sary hita maso, rindranasa na asa ilaintsika ahitantsika loko telo na efatra izay ilaina hampifaly ny mason'ny mpijery.
Klasika sy Retro
Raha mandalo mainty isika, a maitso oliva mangatsiatsiaka, karmine mena ary volontany, hahita palette miloko afaka miasa tsara amin'ny sarin'ny fiara Retro izahay.
Mamirapiratra manga sy maitso
Alokaloka samihafa amin'ny manga sy maizina manga ary miampy mavoIzy ireo dia afaka manome dinamika be amin'ny sehatra rehetra na biby mety maneho ny volony marevaka.
Ireo volomparasy sy voasary amin'ny filentehan'ny masoandro
Raha mandeha amin'ny volomparasy hatramin'ny volomboasary sy mavo, izy rehetra ireo dia afaka mitondra antsika alohan'ny filentehan'ny masoandro mena izay hita taratra amin'ny farihy iray hanomezana seho iray feno fiainana sy loko.
Ny fitoniana manga ny Mediteraneana
Miaraka amin'ny feo volomparasy tena maivana ary iray mainty kokoa, ampiarahina amin'ny volontsôkôlà, dia afaka mahita fitambarana miala sasatra hitondra azy any amin'ny Mediteraneana isika ary manolotra fitoniana.
Ilay be pitsiny sy milamina
Manomboka amin'ny mainty ka hatramin'ny maizina ary ny volondavenona mazava kokoa dia afaka misafidy isika volomparasy somary maivana miampy loko hitanao izay miaraka dia azo ampiasaina hanomezana kanto sy fisehosehoana tetikasa tsara isan-karazany.
Ny tendrombohitra manga
Tsara ny isan-karazany loko manga misy maitso mavana kokoa izy io dia afaka maneho panorama izay manolotra an'io lafiny tony sy mpandala ny nentin-drazana io ihany.
Vintage tamin'ny taona 50
Andiana loko maromaro mifanerasera tsara izy ireo ary maintso miaraka amin'ny loko manga, manga iray hafa manakaiky ny maitso, ary oliva iray indray, na dia mazava be aza, hahitanao seho Vintage.
Turquoise sy mena
Ny manga turquoise miampy ny mena dia lasa fifangaroana mahafinaritra. Manampia ny mainty, manga turquoise manga kokoa ary volondavenona, ary ny valiny dia lalao matihanina amin'ny karazana tanjona kendrena rehetra.
Misafidiana manga manga telo izay manome io lafiny io amin'ny fahavaratra, manga maizimaizina saika mainty ary maitso izay nanesorantsika ny loko. Io fifangaroana loko io dia tena mahery vaika amin'ny karazana doka fahavaratra.
Ny hakanton'ny voajanahary amin'ireo tany
Loko mainty miampy iray andiana gris ary maintyIzy ireo dia afaka mitondra antsika amin'ny firindrana hanolorana ireo be pitsiny.
Ny ranomasina sy ny lanitry ny helo-drano
Fiovaovan'ny a loko mitovy izay miteraka fahazavana maro rehefa tsaboina anaty gradient toy ny sary nalaina izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Loko isan-karazany: fampiasana sy fitambarana
Maria G Moreno dia hoy izy:
Tena mahaliana ary tena azo ampiharina.
Lahatsoratra tsara :)
Valiny tamin'i Mara G Moreno
Modesto dia hoy izy:
Tsy fantatro ity bilaogy ity
Misaotra tamin'ny asanao. Tehiriziko hianarana io ary ataoko eo am-pelatanana hiasa
Mamaly an'i Modesto
Karan-doha goavambe 100 ho fampirantiana ao amin'ny tranombakoka